BUDDHA WAS BORN IN NEPAL. बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो।: Nation of wrong number रङ्ग नम्बरधारीहरुको राज्य
NEPAL IS BIRTHPLACE OF GAUTAM BUDDHA AND VED VYAS (WRITER OF MAHABHARAT). MOUNT EVEREST IS IN NEPAL. NEPAL IS INDEPENDENCE, FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC AND BEAUTIFUL HIMALAYAN COUNTRY.
Nation of wrong number रङ्ग नम्बरधारीहरुको राज्य
यो हप्‍ता नेपालका तीन फरक टोली एसिया भ्रमणमा छन्। टोली नम्बर १: नेपाली क्रिकेर टोली जो एसीसी इमर्जिङ्ग कप खेल्‍न बंगलादेशमा छ। टोली नम्बर २: नेपाली फूटबल टोली जो एएफसी एसियन कप २०१९ छनोट खेल्‍न फिलिपिन्समा छ। र टोली नम्बर ३: प्रधानमन्त्री सहितको सरकारी टोली जो चीनमा भ्रमणमा छ।
टोली नम्बर १: नेपाली क्रिकेर टोली
सिनियर खेलाडीहरु बिना नै बंगलादेशमा लम्केका नेपाली क्रिकेट टीमले जुन किसिमको खेल खेल्नु पर्ने हो त्यो देखेन। पहिलो खेल पाकिस्तानसंग खेल्यो । उक्त खेलमा नेपाल पाकिस्तानसंग ६ विर्केटले पराजित भो। देस्रो खेल आयोजक बंगलादेशसंग खेल्यो त्यसमा पनि नेपाल ८३ रनले पराजित भो। यस खेलमा कप्‍तान ज्ञानेन्द्र मल्‍ल १० बल मा कुनै रन नबनाइ अउट भएका थिए। अब नेपालले तेस्रो खेल हङ्गकङ्गसंग खेल्ने छ । यी दुवै टीम कपबाट बाहिरिसकेकोछ। जुन लयमा नेपालले खेल्नु पर्ने थियो त्यो खेल देखेन। यस्तो हुनुमा क्यान विवादलाई पनि लिन सकिन्छ। क्यानको कारणले नेपालले निलम्बन समेत भोग्‍नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा टीमले राम्रो प्रशिक्षण गर्न सकेन । आफ्नै घरेलू मैदानमा नेपालले केन्यासंग विश्‍व लिग खेल्‍यो जसमा पनि नेपालले खुलेर खेलेको देखेन। यी सबको श्रेय क्यान भित्रको विवादलाई नै दिनु पर्छ।
टोली नम्बर २: नेपाली फूटबल टोली
मलेसियामा भएको सोलिडिटरी कप जीतेर नेपालले एसियन कप छनोटमा प्रवेश गर्न पाको हो। तर जुन किसिमको खेल नेपालले मलेसियामा खेलेको थियो त्यस्तो खेल फिलिपिन्समा देखेन। नेपाल भन्दा फिलिपिन्स फिफा बरियतामा माथि नै छ तर खेलमा पुरानो लय देखेन। ८ मिनेटमा भित्र ३ गोल खानु नेपालको लागि ठूलो चुनौती भो। पहिलो हाफको थाप समयमा विशाल राई बीले खेललाई १-३ मा पुर्‍याएर खेललाई फर्काउने कोसिस गर्‍यो तर दोस्रो हाफमा नेपालले कुनै चमत्कार देखाउन सकेन। त्यसमाथि अर्को गोल थाप्यो। जुन किसिमको टेम्पो नेपालले मलेसियामा देखाको थियो त्यो कुनै कोणबाट पनि फिलिपिन्स विरुद्धको खेलमा देखेन। यस्तो हुनुमा एन्फाको ठूलो हात छ। किनभने एन्फाले राष्‍ट्रिय लिग गर्न सकेको छैन भने अन्तराष्‍ट्रिय मैत्री खेल पनि खेल्ने वातावरण सिर्जना गरेको छैन। टीमले प्रशिक्षण त गर्‍यो तर फरक-फरक टीलसंग खेल्ने अनुभाव कम भएको कारणले यस्तो हुन पुगेको पनि हामी अनुमान गर्न सक्छौ। एन्फाले नियमित रुपमा राष्‍ट्रिय लिग गरेको भए र निरन्तररुपमा अन्तराष्‍ट्रिय मैत्री खेल खेलाको भए खेल नजीते पनि फिलिपिन्ससंग ४-१ पराजिन नहुने थियो होला। यसको सम्पूर्ण श्रेय एन्फालाई जान्छ।
टोली नम्बर ३: प्रधानमन्त्री सहितको सरकारी टोली चीनमा
नेपालका प्रधानमन्त्री एक हप्‍ते भ्रमणमा चीन पसेको छ। देशमा स्थानिय चुनाबको रौनत चलिरहेको छ। तर चुनाव हुन नदिने तत्वहरु पनि छन्। आफ्नो माग वेवास्ता गरेको भनेर मधेषी मोर्चाले सरकार लाई दिएको सहमती फिर्ता लिएर हूल दंग गर्ने धम्की दिएर बसेका वेला राष्‍ट्र प्रमुख विदेश भ्रमणको लागि भनेर एक/एक हप्‍ता विदेश जानु राष्‍ट्रको लागि राम्रो हो जस्तो लाग्दैन। हुन त यस्तो जिम्मेवारीहिन, अयोग्य मान्छेलाई त्यस ठाउँमा पुर्‍याउनुमा हाम्रो नै हात छ।
यी लेखको मुख्य आशय भनेको हाम्रो देशका हरेक ठाउँमा जनता र देशका नाममा रङ्ग नम्बरधारीहरु सिंहासनमा आसिन छन् भन्‍नु हो।
Created by DIMDUNG 16 at Tuesday, March 28, 2017
माघ: ३बिहिवार: एकादशी, पुत्रदा एकादशी व्रत, मन्वादि